Warshadda Tuubada Dalbashada Dareeraha Warshadaha, Soo-saareyaasha - Soo-saareyaasha Tuubbada Tuubada Warshadaha Shiinaha ee Shiinaha
Tuubada kiimikada ee qiimaha wanaagsan Tubada Dhismaha: Caddaan, Smooth Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE), EPDM Reinforcement: Xadhig dhar dhaadheer oo silsilad leh oo leh silsilad bir ah oo daboolan Caag: EPDM u adkaysta kiimikada, jawiga iyo ozone, buluug, cagaar duuban ama jiingad leh. Heerkulka shaqada ee habboon: —40 ℃ ~ 120 ℃ (-72 ℉ to + 248 ℉). Cunsurka amniga: 3: 1. Codsiga Feejignaanta UHMWPE tuubada kiimikada ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa nuugista iyo sii deynta asiidhyada adag iyo alkali iyo dhammaan noocyada dareeraha warshadaha. Ma ...
Tuubbada cinjirka ah ee cuntada leh FDA Shahaadada Dhismaha Tubta: Caddaan, siman, NR, NBR ama EPDM caag tayo leh Cuntada Xoojinta: Isku dhufashada dhar sare oo la isku qurxiyo iyo silig Helix Dabool: siman (dhammeystiran), caag synthetic, caddaan, buluug, cagaar duuban ama jiingado . Heerkulka: -32 ℃ ilaa 80 ℃ (-90 ℉ ilaa + 176 ℉) Codsiga Tuubbada jilicsan ee fasalka cuntada ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa nuugista iyo dheecaanka dheecaanka, khamriga, cuntada ku dheji iyo saliidda la cuni karo iwm Astaamaha: Astaamaha waraaqaha ayaa aad u jilicsan, duqoobay -resi ...
Tuubada Hawada Lagu Xoojiyay Hawada Oo leh Cadaadis Sare Tuub kasta oo lagu tijaabiyo 1.5 jeer oo cadaadis shaqo ah, maadada caagga ah ee sarreeya ee aan lahayn caag dib loo rogay. Tube Dhismaha: NR & SBR caag synthetic, midab madow. Dib-u-xoojin: Xadhig dhar dhaadheer oo silig ah ama xarig dhejis ah. Dabool: NR & SBR caag ah synthetic, dusha siman ama duuban, madow, jaalle, casaan ah ayaa la heli karaa. Codsiga Inta badan waxaa loo isticmaalaa gudbinta hawada, gaaska aan firfircooneyn iyo biyaha macdanta, dhismaha, injineernimada, dhismaha markabka, wax soo saarka birta ...
Soo nuugista iyo tuubada tuubada tuubada dhismaha: Madoow, siman, NR, xarunta caag SBR. Xoojinta: Xarkaha sare ee siligga siligga oo silig silig ah ka sameysan. Dabool: Madoow, siman, aragti maro ama jiingad, SBR caag isku darka. Codsiga Nooca noocan ah waxaa loogu talagalay nuugista iyo soo saarista biyaha, iyo dareerayaasha aan sunta ahayn ee loo isticmaalo goobaha dhismaha iyo codsiyada waxsoosaarka warshadaha. Cadaadiska sare ee dheecaanka biyaha cadaadiska ah ee xaaladaha qalafsan, xaaladaha shaqada ...
Tuujinta dhuumaha saliidda gawaadhida taangiga tubada Dhismaha: Madow, Jilicsan, NBR. Xoojinta: Xarkaha sare ee siligga siligga oo silig silig ah ka sameysan. Daboolka: Madow / casaan / cagaar, dusha la duubay ama jiingado, cimilo iyo ozone. adkaysi leh, caag synthetic. Cunsurka amniga: 3: 1. Heerkulka: -30 ℃ (-22 ℉) illaa + 80 ℃ (+ 176 ℉) Codsiga nuugista iyo soosaarida alaabada saliidda ku saleysan, naaftada, baatroolka, saliidaha, shidaalka. Waxay u adkeysaneysaa faaruqinta, korontada ka hortagga ah, oo leh silig naxaas ah Tank Truck Oil tubbo loogu talagalay taangiga taangiga ...
Tuubada Dhismaha tuubada saliida ee Haydarooliga: Madow, Nadiif NBR + SBR Xoojin ah: Xadhig sare oo silig ah oo silig ah oo silig silig ah. Daboolka: Madow / casaan / cagaar, dusha la duubay ama jiingado, cimilo iyo ozone. adkaysi leh, caag synthetic. Cunsurka amniga: 3: 1. Heerkulka: -20 ℃ (-4 ℉) illaa + 80 ℃ (+ 176 ℉) Codsiga Si ballaaran ayaa loogu isticmaalay qalabka farsamada qalabka hawo-soo-saarka, soo-celinta dhuunta, gawaarida injineernimada, iwm, waxyaabaha udgoon ee hydrocarbon-ka kama badna 20%. Cimilada dabeecadaha iyo daboolka u adkaysiga xoqidda. Labada sm ...
Super abrasion tubada sandblast u adkeysata Tube: Madoow, siman, NR caag synthetic Reinforcement: Isku dhufashada dhar sare oo synthetic xoog Dabool: Madoow, siman (duudduuban), Nabaro caag NR synthetic caag ah Codsiga darbiga jilicsan ee xoqida tuubada u adkeysata gaarsiinta tallaalada birta, ciid , Codsiga qarxinta kuusha Heerkulka: —20 ℃ (-4 ℉) ~ 80 ℃ (+ 176 ℉) Astaamaha: Tuubadayada Sandblast waxaa loogu talagalay codsiyada guud ee sandblastka. Waxaa loogu talagalay wareejinta xawaaraha sare ee ciidda, birta birta ah, ...
Qabashada Tuubada Qalabka
Xirashada qalabka wax-qabadka adkaysiga leh ee tuubbada tuubbada: Madoow, siman, NR + BR caag isku dardaarmay Xoojinta: Xarkaha sare ee siligga dharka ama silsiladda dharka sare ee siligga oo leh silig birta ah. Dabool: Madoow, siman (duudduuban) ama jiingado, xoqid adag oo caag ah NR caag ah. Heerkulka: —20 ℃ (-4 ℉) ~ 80 ℃ (+ 176 ℉) Codsiga Abrasion iska caabiya daboolka iyo daboolka lagu farsameeyay waxyaabaha ugu tayada sareeya. Waxaa loo adeegsaday wareejinta qalabka qalalan & xoqida oo ku habboon sibidhka qallalan, nuuradda dhagaxda iyo wixii kale ee aniga igu xoq ...
Xirashada High tuubada sibidhka qalalan tuubada Dhismaha Tube: caag dardaro, xirtaan u adkaysta iyo saamaynta u adkaysata (NR + BR). Lakabka xoojinta: Dharka siligga sare ee silsiladda dharka adag: NR + SBR Cunsurka nabadgelyada: 3: 1 Heerkulka shaqada: —20 ℃ (-4 ℉) ~ 80 ℃ (+ 176 ℉) Codsiga: Tuubada adkeysata xoqida iyo daboolka lagu farsameeyay waxyaabaha ugu tayada sareeya. Waxaa loo adeegsaday wareejinta qalabka qalalan & slurry oo ku habboon sibidhka qalalan, lime dhagax dixeed iyo warbaahinta kale ee xoqan. Astaamaha Calaamadaha gudaha ka samaysan yihiin w ...
Tube Dhismaha: NR & SBR caag synthetic, midab madow. Xoojinta: Xarkaha sare ee siligga dunta. Dabool: NR & SBR caag ah synthetic, dusha siman ama duuban, madow, jaalle, casaan ah ayaa la heli karaa. Heerkulka shaqeynta: -20 ° C - 80 ° C Faa'iidada 1. U adkaysiga xoqida, daxalka, kuleylka iyo gabowga Khafiifka, adag, waara iyo nolosha adeegga dheer. 2.Rolls up flat waa dhaqaaq fudud, dib u helid iyo xamili. 3. Culeys fudud, adag, adkeysi leh iyo adeeg dheer. 4.Fududee dherer dherer ah oo leh tuubbo tuubbo ...
Steam Iyo tubbo biyo kulul
Steam iyo tuubada biyaha kulul tubada Dhismaha: Madoow, siman, U adkaysiga heerkulka sare ee uumiga dhadhanka EPDM ee caaga ah. Lakabka xoojinta: Xadhigga dharka siligga sare ee silsiladda Nabadgelyada: 4: 1 Daboolka: Madow / caddaan / buluug / cagaar, siman (dhammaystiran) caag EPDM ah. Heerkulka sare, cimilada iyo ozone u adkaysata. ...